Surftheworld 2012 wifi hacking tool (​ပြေ​မ​ပြေ​က​တော့ ​မ​သိ​ဘူး​နော် :P) (wifi hacking tool ​ဆို​တာ​က​တော့ ​သေ​ချာ​ပါ​တယ်) ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Myat Htut Yein Win (Johnny Htut) August 11, 2012 at 12:07 PM
Can't run it on my computer!! pls help!!
phone win August 11, 2012 at 4:08 PM
​နည်း​ပ​ညာ​များ​ကို​ဖြန်​ဝေ/​သင်​ကြား​ပေး​နေ​တဲ့ ​ကို ​ညီ​နေ​မင်း ​ကို ​အ​ထူး​ဘဲ​လေး​စား​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ၊
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ကျန်း​မာ/​ချမ်း​သာ​လို့ ​စီး​ပွား​များ​ဆ​ထက်​တိုး​ကာ-​ပ​ညာ​များ​ကြီး​ပွား ​တိုး​တက်​အောင်​မြင်​ပါ​စေ​လို့--
jj August 12, 2012 at 11:51 AM
​ကျွန်​တော်​ဒေါင်း​ပြီး​ပြီး extract file ​လုပ်​တာ​ဘာ​မှ​မ​တွေ့​ဘူး...
aung min August 14, 2012 at 11:23 AM
mrwinkyawaung4 August 25, 2012 at 4:25 PM
​အ​ကို​ရေ ​ကျွန်​တော် ​သိ​သ​လောက် MAC Filter ​လုပ်​ထား​ရင် .. ​ပတ်​စ​ဝေါ ​မှန်​ရင်​တောင်း​ချိတ်​လို​မ​လွယ်​ဘူး
Super Hero August 31, 2012 at 7:27 AM
​ကျောက်​ခေတ် August 31, 2012 at 8:30 PM
​ဒေါင်း​လို့​တော့ ​ရ​သွား​တယ်​ဗျာ။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ကျွန်​တော် ​စမ်း​ခဲ့​သ​မျှ ​သက်​တမ်း​အ​ရ​တော့ ​ထုံး​စံ​အ​တိုင်း ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တာ​ပဲ ​တွေ့​ရ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။ ​နောက်​တ​ခါ​တော့ ​ညီ​နေ​မင်း​ကိုယ်​တိုင် ​စမ်း​သပ်​ပြီး ​အောင်​မြင်​စွာ​တွေ့​ရှိ​ခဲ့​ရင်​ဖြစ် ​ထပ်​မံ Share ​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ် :D
Super Hero September 15, 2012 at 2:11 PM
Nyinyi naing September 16, 2012 at 6:49 PM
sayar nay min .how i use?please say me
nainglinaung October 19, 2012 at 12:01 AM
min November 10, 2012 at 8:58 PM
​ဟုတ်​လည်း ​ဟုတ်​ပဲ ​နဲ့ .....
moetae March 11, 2013 at 10:47 PM